भगवान् श्रीकृष्णका अनुसार कोही घरमा आउनेबित्तिकै पहिला पानी दिनु राम्रो कि नराम्रो ?? – kollywood hungama
भगवान् श्रीकृष्णका अनुसार कोही घरमा आउनेबित्तिकै पहिला पानी दिनु राम्रो कि नराम्रो ??
भगवान् श्रीकृष्णले केही यस्ता वस्तुको वर्णन गर्नुभएको छ जसलाई घरमा राखेर सामान्य मनुष्यले दरिद्रता भगाउन सक्छ । सनातन धर्मका पौराणिक दस्तावेज र शास्त्रहरूमा मनुष्य जीवनका हरेक ठूलासाना समस्याका समाधान बताइएका छन् ।उहाँका अनुसार प्रतिदिन घरमा गाईको घिउले बालेको दियो दान गर्दा अनि घिउबाट भोगप्रसाद चढाउँदा देवीदेवताको कृपा बर्सन्छ । यस्तो गर्दा घरहरूमा दरिद्रताको वास हुँदैन । घर आएका पाहुनालाई पानी पिउन दिँदा अशुभ ग्रह टर्छन् । त्यसैले कोही घरमा आउनेबित्तिकै पहिला पानी दिनुस् ।महलाई पवित्र खाद्यान्न मानिएको छ ।
यसले घरबाट नकारात्मक ऊर्जा हटाउँछ ।घरलाई जहिले पनि सफा राख्दा खर्चमा कमी आउँछ र धनधान्य बढ्छ । सौर्यमण्डलका ग्रहहरूले मनुष्यको जीवनलाई धेरै प्रभावित पार्छन् । प्रत्येक दिन व्यक्तिले ग्रहको हिसाब अनुसार निधारमा चन्दन लगाउँदा शुभ फल प्राप्त हुन्छ । चन्दन निधारमा लगाउँदा शीतलता प्राप्त हुन्छ र पापहरूको नाश पनि हुन्छ । घरमा चन्दन राख्दा त्यसको सुगन्धले नकारात्मक ऊर्जा पनि नष्ट हुन्छ । कमल हिलोमा फुल्छ तर उसलाई हिलोले छुँदैन । उहाँको चित्र घरमा राख्दा पनि फल पाइन्छ ।
Next भगवान शिव को दर्शन गर्नुहोस,आजको दिन शुभ रहोस तपाइको !